Nanị otu akụkụ nke ire ere nwere ike idafu ụlọ ọrụ gị $ 4 nde kwa afọ | Martech Zone
Anyị na-ekwukarị banyere ahịa site na ego ha nwetara, mana ọ bụghị site na nfu mgbe ọ na-aga nke ọma. Ahịa bụ egwuregwu ọbara n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ma ọ dị ka ọ nwere obere ndidi n'oge a maka ndị ọkachamara n'ahịa ịbawanye, wulite mmekọrịta, ma gbanwee ndị ahịa. Na onye njikwa ịre ahịa ọbụnadị nwere ọnọdụ na-enweghị atụ nke inwe mkpali na ịkwanye ndị ọrụ ịga nzukọ na ịme ihe mgbaru ọsọ. Nweta onye njikwa na-ezighi ezi na ndị ọrụ ahịa niile nwere ike ịpụ. M na-agba àmà ya aka-nke mbụ, na-ekiri ahịa management si lekwasịrị anya amụma, ntinye data ma ọ bụ na-akwalite a onye dị egwu na ahịa n'ime ọnọdụ n'èzí ha bailiwick.
Ahịa na-enyere teknụzụ aka bụ ngwa ọrụ iji nyere ndị ọrụ ahịa gị aka ma mee ka ikike ha ịkwaga rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma. Okwesighi ibuli ihe mgbochi, o kwesiri iwepu ha. Ọ bụ otu ihe mere anyị ji hụ ndị nke anyị n'anya Ahịa n'elu ikpo okwu (onye nkwado) nke ukwuu. Dashboard ha na Salesforce maka ndị ọrụ na njikwa na-ebelata oge ọ ga-edekọ, soro ma kọọ maka ọrụ ahịa.
Ọtụtụ ndị njikwa ahịa anaghị enweta nkwado nkwado site n'aka ndị otu ha. Kama nke ahụ, a na-atụ anya na ha ga-emeri nsogbu nke mgbanwe na njikwa na mgbanwe sitere na ịre ngwaahịa iji nye nghọta azụmaahịa n'onwe ha. N'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ na-etinye ego na ndị njikwa ha, ọtụtụ anaghị etinye ego n'ụzọ dị mma iji zụlite nka achọrọ iji mee ka ndị njikwa rụọ ọrụ nke ọma. Nke a abụghị naanị na ọ nwere mmetụta dị ukwuu na ndị njikwa onwe ha, mana ọ na - emekwa ka ndị na - ere ahịa ghara ịba uru na, n'ikpeazụ, na - ewute usoro ụlọ ọrụ ahụ Jessica Cash, Onye isi oche, Solution Development & Innovation maka CEB Global.
Isi okwu a bụ na otu onye isi dara ada nwere ike idafu ụlọ ọrụ ihe ruru nde $ 4 na arụpụtaghị ihe ọ bụla, njikwa otu ndị na-adịghị mma, ahụmịhe ndị ahịa, enweghị ego, ụgwọ ọnwa na ọzụzụ. Nke a bụ mmebi nke otú ahịa Managers ida.
Tags: njikwa na-adịghị mmacebblọọgụidaokpujessica egonjikwa njikwadashboard ahiaNkwado ire ahịaire ahianjikwa ahiaọnụ ahịa nchịkwa ahịaarụpụtaghị ahịambanye n'ọrụahịa akụkọụgwọ ụgwọotu ahiaọzụzụ ahịaire ere